CF Kaadị Format Error? Edozi!
Olee otú Idozi CF kaadị format njehie?
Igosi CF Kaadị Format Error na 3 Nzọụkwụ
1 otú ndozi CF kaadị format njehie?
Ndewo, m ga-esi a ozi-agwa m na m USB flash mbanye kwesịrị-Ị mgbe m itinye ya na kọmputa m. Mgbe ahụ, m pịa ok, na-agbalị Ọkpụkpọ na m ga-esi a ozi si "disk bụ dee na-echebe". O yiri m nwetara CF kaadị format njehie ugbu a. Nsogbu bụ na m nwere ọtụtụ dị mkpa faịlụ na ya. Ọ bụla pụrụ inyere m aka ka m faịlụ azụ biko?
Jiri ya nwayọọ. CF kaadị format njehie bụ egwu ma ị ka nwere ohere iji naputa gị data. CF kaadị format njehie a na-ejikarị mere site usoro nrụrụ aka, na-ezighị ezi njikwa ma ọ bụ nje agha. Ọ bụrụ na gị format errored USB flash mbanye na-adịghị agbajikwa (n'ụzọ anụ ahụ mebiri emebi), gị faịlụ ka nwere ahụ ike na ya na i nwere ike inwe ya azụ na a CF kaadị format njehie data mgbake usoro.
Were Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị ka ihe atụ. Nke a pụrụ ịtụkwasị obi na ike mgbake omume-enyere gị aka naghachi data mgbe CF kaadị format njehie ihe pụrụ iche na ụzọ dị mfe. Ọ na-enyere gị iji weghachi fọrọ nke nta niile faịlụ site na gị CF kaadị na format njehie, gụnyere oyiyi, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, wdg n'agbanyeghị na ị na-eji a Windows kọmputa ma ọ bụ a Mac, a mmemme ike inyere aka.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke usoro ihe omume ma na-amụta otú ndozi CF kaadị format njehie site n'ịgụ na-esonụ ọdịnaya.
2 Idozi CF Kaadị Format Error na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Ka idozi CF kaadị format njehie na Windows version nke ngwá ọrụ, nke nwere yiri ọrụ na Mac version.
Biko hụ na gị na CF kaadị nwere ike ghọtara site na kọmputa gị na ị na-enwebeghị ọhụrụ ọ bụla data na ya.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode idozi CF kaadị format njehie
Mgbe launching usoro ihe omume gị na Windows kọmputa, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode na-amalite CF kaadị format njehie data mgbake.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị CF kaadị na format njehie
Usoro ihe omume ga-chọpụta gị CF kaadị ma na-egosi ya na window. Ị nwere ike họrọ ya na pịa "Malite" ka usoro ihe omume Doppler faịlụ na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data mgbe CF kaadị format njehie
Na njedebe, niile ọdịnaya na gị CF kaadị na format njehie ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ele mbụ faịlụ aha ma ọ bụ preview hụrụ ihe oyiyi na-ego otú ọtụtụ nke furu efu faịlụ nwere ike Ewepụtara.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara faịlụ ị na-aga iji weghachi si gị CF kaadị na format njehie na pịa "Naghachi" na-ha gaa na otu ọnọdụ na kọmputa gị.
Cheta na: Ebe ọ bụ na data nwere ike mfe overwritten, biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ gị CF kaadị na format njehie.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> CF Kaadị Format Error? Edozi! - Naghachi data si CF Kaadị Error